Thokozani Khuphe – Zimbabwe Daily
ZIMBABWE – The drama continues to unfold in the Thokozani Khupe led MDC-T party, as the National Council moved to expel one of the presidential candidates, Abednico Bhebhe from the party – he is being accused of “supporting another political party other than the MDC-T.” Bhebhe was locked in a hot contest with Thokozani Khupe, …
Khupe and Mwonzora Expel Rival Read More »
HARARE – MDC-Alliance youth on Sunday night entered the long time party’s headquarters, Harvest House months after it was possessed by the disgruntled Khuphe and her MDC-T party. It is believed the youths are working with a section of other youths previously loyal to Thokozani Khuphe. The building was occupied months ago by Khuphe’s MDC-T …
MDC Alliance Youth Reoccupy ‘Stolen’ HQ, accuse Khuphe Of Aiding The Suffering Of The Masses Read More »
HARARE – In a shocking move, Zimbabwe’s unpopular opposition MDC-T party on Saturday announced that its candidates in impending council and parliamentary by-elections will contest under the MDC Alliance. In early 2020, the increasingly partisan Supreme Court declared Dr Khupe legitimate party leader, and this left Advocate Nelson Chamisa to lead Zimbabwe’s popular opposition MDC …
Shock As Khupe grabs MDC-Alliance party Read More »
HARARE – Thokozani Khuphe and her MDC-T party have continued their recall crusade of MDC-Alliance elected officials, this time targeting eleven Harare Councillors, three from the Beitbridge and one from Gwanda Council. In letters dated 11 September 2020, Local Government Minister, July Moyo wrote to the various City Council Town Clerks informing that he had …
Khuphe, Mwonzora continue purge on MDC-Alliance legislators Read More »